Ithegi: umxholo wentengiso | Martech Zone
Ithegi: umxholo wentengiso
Iindlela ezi-8 zokuba wenze uMxholo odala abaThengi
NgoMvulo, Februwari 20, 2017 NgoMvulo, Februwari 20, 2017 Douglas Karr
Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, besikade sihlalutya yonke imixholo yabathengi bethu yokuchonga umxholo oqhuba olona lwazi, ukubandakanyeka kunye notshintsho. Yonke inkampani enethemba lokufumana isikhokelo okanye yokukhulisa ishishini labo kwi-Intanethi kufuneka ibe nomxholo. Ukuthembela kunye negunya zizitshixo ezibini kuso nasiphi na isigqibo sokuthenga kunye nomxholo oqhuba ezo zigqibo kwi-intanethi. Oko kwathethi, kufuna kuphela ukujonga ngokukhawuleza kwii-analytics zakho ngaphambi kokuba ufumanise ukuba
NgoLwesibini, nge-1 kaDisemba ngo-2015 Douglas Karr
Mhlawumbi oku kunokuba infographic inokuba sisindululo esinye esikhulu… fumana abafundi ukuba baguquke! Ngokukrakra, sididekile kukuba zingaphi iinkampani ezibhala umxholo ophakathi, ungahlalutyi isiseko sabathengi, kwaye ungaphuhlisi izicwangciso zexesha elide zokuqhuba abafundi kubathengi. Ukuya kwam kuphando koku kuvela kuJay Baer ochonge ukuba ibhlog enye ibiza inkampani i-900 yeedola ngokomndilili. Ukudibanisa oku kunye nenyani yokuba i-80-90% yazo zonke